I-Pope okanye i-Hierophant Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Yandisa ulwazi lwakho lwangaphakathi kwaye wabelane ngalo nabanye.
Intsingiselo yekhadi le-tarot «Hierophant» okanye «UPopu»
La Ikhadi leHerophant Tarot okanye "uPopu" ibhekisa kutitshala nakwizifundo zokufunda iindlela zokufunda zomthetho wendalo. Amandla eli khadi akhomba kuwo iarhente ethile okanye isibonelelo esinokutyhila iimfihlelo zobomi, imijikelo Inyanga namaza, amakhonkco phakathi kwabantu namazulu.
Kuba izindlu zoonongendi yayizezona ndawo umntu anokufunda kuzo nokubhala kumaXesha Aphakathi, uHierophant wayengomnye owayecelwe ukuba angene ngumfundi. Nguye owasungula ikharityhulamu yekhosi yokufunda ye-neophyte.
Rhoqo imelwe ngesandla sokunene esiphakamileyo ukusikelela, iHierophant inxulumene ne Inzala yakudala yaseMelchezidek, umqalisi wesiko lobubingeleli bamaHebhere, ohambisa iimfundiso. Zonke i-shaman zaso nasiphi na isithethe zisekwe kule archetype.
Yakha ubuchwephesha bakho, kwaye unokholo lokuba uyinkosi yobuxoki.
El UHerophant okanye uPapa ukucebisa ukuba ubuyele kwindima yomfundi onomdla. Funda konke onakho malunga nendawo oyikhethileyo. Vumela olo lwazi lube yinxalenye yakho kunye nefuthe lokusebenza kulwazi lwakho lwemihla ngemihla. Ngale ndlela, unokucotha kwaye ngokuthe chu ubeke ukuthembeka okwenyani kwicandelo lakho elikhethiweyo okanye isihloko.
Fumana imbeko nokwamkelwa ngokugqibezela imfundo yakho nokwandisa amava akho. Ukuba sele unawo onke amava afunekayo, emva koko Phinda uyibhale kwakhona i-resume yakho ukuze abanye baqonde ukuba ungubani nokuba yintoni enegalelo kwimeko. Gxila kwinjongo yakho kwaye uzimisele. Unokumiselwa ukuba ube yinkosi ebukumkanini bakho.